पावर र पहुँचवालाका कुरा गाउँबाट नेपालगन्ज पुग्दाका ७ संयोग
यसरी ठगिन्छन सोझासाझा
प्रकासित मिति : २०७६ कार्तिक १९, मंगलवार ०९:११ प्रकासित समय : ०९:११
जाजरकोट खलंगा आएर नेपालगन्ज जाने बसको टिकट काटे टिकटमा सिट नं खुलाइएको थिएन । सोचे जस्ले सिट रोज्यो त्यहि बस्छ होला । गएर क्यावीन सिट रोजे केहि समयपछि गाडिको स्टाप आएर आफनो मान्छेले पहिलै रोजेको भनेर मलाई उठायो आफनो मान्छेलाई बसाल्यो । म हेरेको हेर्यैँ भएँ । किनकी मैले टिकट काटदा गाडि रित्तो थियो । म उठदा गाडि प्याक भैसेको थियो । कसरी पहिलै सिट रोज्यो उसको मान्छेले ? बस चढेँ बस चढदा रित्तो बस म सिटबाट उठदा खचाखच भैसकेको थियो । उसको पहुचका अगाडि म निरह भएँ ।
बसले छेडा आएर खाना खाने समय मिलायो सबै गाडिबाट और्लियौँ । उनिहरुको अर्डर भएको होटलमा पस्यौँ । गाडि स्टाप र केहिजना सुकिला मान्छेलाई भित्र गोप्य कोठामा लिएर खाना खुवाइयो । हामी होलसेलवाला बाहिरै भरियौँ । बर्षायामको कर्णालीको पानी जस्तै दाल मात्र दुइ फयाक नकेलाएकोे आलुको तरकारी दुई लहरा साग र थोरै लेदो अचार सहित भोकको पुजा गरियो । म शाकाहारी भएको उनिहरुलाई के थाह सुटुक्क ल्याएर एक प्लेट कुखुराको मासु पनि राखिदिए । ३ पटक फिर्ता लिनुस भनेँ सुनेन् अन्तत त्यसको मुल्य पनि दुरुस्तै तिरियो ।
सिट नजिकै एकजनी बाहुन थरकी युवती बसेकी थिइन । उनीसंग लामै कुराकानी भयो कुराकानीका क्रममा नाम र थर सोध्नुभयो मैले– विश्वकर्मा भने, उहाँले शिरदेखि पाउसम्मा नजर डुलाएर हेर्नु भयो । तर त्यसपछि मन लाग्दी बोल्नै छाडनु भयो । मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो ।
बसले नेपालगन्ज पुष्पलाल चोक नजिकै झारी दियो । जानु थियो चारबाहीनी चोक अटो रिक्सा चढेँ चारबाहिनीसम्मा भाडा कति हो सोधेँ मिलाएर दिनु होला भन्यो सोचेँ मिलनशार रहेछ ठिकै त लग्ला । चारबाहीनी पुगेर कति दिउँ भनेर सोधेँ ३ सय भन्यो । म तिन छक्क परेँ मेरो आकलन थियो १ सयको तर ३ गुणा बढि भनेपछि म जंघिए ।
यसरी भन्नु त भएन नी कहाँ यति महगो.हुन्छ नजिकै त हो । उसले यो पहाडबाट आएको हो यसलाई मुर्गा बनाउनुपर्छ सोच्यो होला रातिको समय हो भनेर जिद्धि गर्न थाल्यो धन्न १ सय ५० मा कुरा मिल्यो र फर्केँ ।
बिहान अस्पताल चेकअप गराउन पर्चा लिन भेरी अस्पताल पुगेँ अस्पतालको लाइनमा लागे । गरिबहरुका लागि सस्तो र सजिलो लाग्ने भेरी अस्पतालमा मान्छेको भिड हुनु स्वभावीक थियो । भिडको बिचमा भिड छिचोल्दै पर्चा हेल्परलाई बुझाएर बसेँ १० बजे बुझाएको पर्चाको पालो साढे १२ मा आयो करिब ३० जना पछाडि रहेको पर्चा सहयोगिले ६० जना पछि बनाइदियो । मनमा अन्याय भएको महशुस भैइरहयो भन्न सकिन किचकिच गर्यो भने झन अप्ठयारो होला सोचेँ ।
डाक्टरको हेल्परका रुपमा रहेका गेटपालेहरुले आफना मान्छे र चिनेका मान्छेलाई पहिला पठाउने कुरा त्यति नौलो लागेन । चिनेका मान्छेहरु आए मुश्कुराँउदै सुटुक्क भित्र पठाउथे । मान्छेअनुसारको उनिहरुको ब्यवहार अजिबको थियो । पालेहरुको तमासा भनेर चित्त बुझाँए ।
डाक्टरसंग चेकअप गराँए भिडियो एक्सरे रगत चेक आदी गर्नु पर्ने भयो । सबै कुराको अभाव मेरो लागि सस्तो र छिटो सेवामा थिए । भिडियो एक्सरे गर्ने ठाँउ गएको पर्सि मात्रै आउनु भन्यो । मसंगैका केहि बिरामीको उतिबेलै गरिदियो । म चुपचाप हेरि रहेको देखेरे आएर कानमा भन्यो तपाँइलाई छिटो चाहिएको छ भने गेट बाहिर फलानो अल्ट्रासाउन्डमा गएर गर्नुस यो चिट लैजानुस छिटै गर्दिन्छ भन्यो । पर्सिसम्मा कुर्नु भन्दा त्यहि उत्तम लागेर स्वीकार गरेँ उसले आफनो सहि सहितको चिट पठायो । गएँ तिन जनापछि पालो आयो तेब्बर रकम तिरेर भिडियो एक्सरे गरेँ ।
सम्पुर्ण रिर्पाटहरु लिएर ३ बजे डाक्टरकोमा गएँ डाक्टर हतारमा भएकोले त्यहाँ समय दिन सकेनन् उनले ५ बजे निजि क्लिनीकमा बोलाए आफुलाई त्यहि भेटन सकिने नत्र एक हप्ता बिदामा रहने बताए । एकहप्ता कुर्नु भन्दा उतै क्लिनिकमा जाने निधो गरेँ । भेरीमा २० रुपैयाँ तिरेर हेरेको मेरो रिर्पोट ५ सय तिरेर देखाँए । त्यहि क्लिनीकबाट औषधी बोकेर फिर्ता भएँ ।
अस्पताल नजिकै छेऊको एक रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गएँ । सुरुमै मिनरल वाटर ल्याएर दियो । रेस्टुरेन्ट हेर्दा राम्रै लागेकोले मिनरल वाटर सर्भिस नै होला भनेर पिइदिएँ । बिल आउँदा पो थाह भयो ३० रुपैया पर्दोरहेछ । कम्तिमा ‘सादा पानी दिउँ कि बोतलको ? भनेर सोधिनु पथ्र्यो भन्ने लाग्यो । हामी जस्ता पहाडबाट शहर झरेकाहरुसित मनग्गे पैसा नहुन पनि त सक्छ ।
हरेक नागरीक केहि न केहि रुपमा दिनहुँ ठगिरहेको हुन्छ । दलाली हर कुरामा छ । यी केही अति सामान्य र दिनहुँ भोगिने घटना हुन नेपालमा दलाली गर्नेहरूले मनग्ये कमाइरहेका छन । सोझासाझाहरु सार्बजानीक गाडीदेखि रिक्सासम्मा ठगिरहेका हुन्छन । यसतर्फ कसको ध्यान जानु ।